आइपीएलः मुम्बई र पन्जाब खेल्दै, टिममा को–कोले पाए स्थान? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः मुम्बई र पन्जाब खेल्दै, टिममा को–कोले पाए स्थान?
काठमाडौं, चैत १६ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत मुम्बई इन्डियन्स विरुद्धको खेलमा किंग्स इलाभेन पन्जावले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ४ः१५ बजेदेखि शुरु भएकाे छ । यी दुई टिमले एक खेलमा जीत र एक खेलमा हार बेहोरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएल २०१९ मा क्विन्टनको पहिलो अर्धशतक
ट्याग्स: Mumbai Indians Vs Kings XI Punjab